Taylor's Bay Family Bach, 129 Fortesque Street - I-Airbnb
South, Hawke's Bay, i-New Zealand
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Vance
Itholakala eTaylor's Bay eNhlonhlweni ye-Mahia, i-129 Fortesque Street iwuhambo olufushane nje ukuya ogwini.
Le ndawo ilungele umndeni noma imindeni emibili, nendlu enkulu elala abantu aba-4 nendawo yokulala enamathiselwe egaraji elala abantu abane. Indlu inikeza ipulani elivulekile lokuhlala.
Lesi sigaba sibiyelwe ngokuphelele, sinendawo yokupaka eningi, indawo yokugcwalisa izinhlanzi, umpheme ongaphambili nendawo yangaphandle yangasese ngemuva kwendawo.
Isevisi Yokuhlanza Ukuhamba iyimfuneko futhi ibiza u- $ 120; lokhu kuhlanganisa ukukhishwa kokuvuselela kabusha. Sicela uqinisekise ukuthi izitsha zenziwe futhi i-BBQ ihlanzwa ngaphambi kokuba uhambe.
Izivakashi kudingeka zisuse udoti ovamile endlini. Izikhwama zodoti ezigunyaziwe zomkhandlu zingathengwa esitolo sendawo. Sicela ubeke izikhwama esangweni lapho uhamba.
Amashidi awafakwanga esilinganisweni esivamile ngakho sicela ulethe; amathawula etiye, amathawula, amashidi, amacala omcamelo njll.
Amashidi atholakala ngesicelo kuphela, futhi kubiza u- $ 25per umuntu. Sicela uqinisekise ukuthi ungathanda le sevisi phakathi nenqubo yokubhukha.
Ukudoba kanye Ne-Diving yizinto ezikhangayo ezisobala zaseMahia. Izinsiza zokwethula izikebhe ezinhlangothini zombili zenhlonhlo zivumela ukufinyelela ezindaweni ezinhle kakhulu zokudoba kanye nezindawo zokutshuza cishe kunoma yiluphi uhlobo lwesimo sezulu. Izinhlanzi ezintsha, i-paua, i-kina ne-crayfish kulula ukuzithola, futhi uqinisekiswa njalo ukuthi uzofika ekhaya nokudla kwasolwandle okusha komndeni. Kukhona imikhumbi ephihlizeka engaphezu kuka-20 ezungeze inhlonhlo ye-Mahia ngakho-ke impilo yezinhlanzi iyamangaza, kanye nenqwaba yezindawo zokutshuza ezithakazelisayo.
Uhambo oluhle lwe-Mahia Peninsula lunikeza izivakashi ukubukwa okuhle kakhulu kogu lwase-Wairoa nendawo yokulondoloza. Lesi siqiwu sitholakala kumakhilomitha ayi-7 eningizimu yeMahia Beach phezulu ngomgwaqo uKinikini. I-loop track engu-3.5 km ikuhambisa kwesinye sezibonelo ezinhle kakhulu zehlathi elingasogwini ogwini olusempumalanga ye-North Island. Vumela amahora angu-2 nemizuzu engu-30 ukuhamba le threkhi. Olunye uhambo olumangalisayo ukhuphuka iMokotahi Hill eyisakhiwo sodumo. Kungu-20min umqansa ukuya phezulu, futhi unokubukwa okuhle kakhulu kolwandle e-Mahia Beach eyake yaba khona... ungabuka kude eningizimu ukuya eNapier nasenyakatho ukuya e-Gisborne.
I-Mahia Peninsula iyi-Surfing Mecca futhi ihlanganisa amanye amagagasi amahle kakhulu nezindawo zokuntweza ezweni. I-Mahia inedumela elihle kakhulu lokuletha ukuntweza okuthembekile, okungaguquki kanye nekhwalithi ephezulu cishe kunoma yisiphi isimo sezulu. Ukuma nezici zendawo yeNhlonhlo ye-Mahia kusho ukuthi kunokwehlukahlukana okukhulu ezinhlotsheni zekhefu nezindawo ezikhukhumele - lapho ulwandle, iphoyinti kanye nezindawo zamatshe aphuka zicosha ukukhukhumala enyakatho, empumalanga naseningizimu.
I-Mahia Peninsula inenkundla yegalofu enezimbobo ezingu-9 edume kakhulu etholakala emkhathini kanye nasezindundumeni zesihlabathi e-Mahia Beach. I-Mahia Golf Club yasendaweni ibamba imiqhudelwano yegalofu njalo ethokozelwa yiwo wonke amazinga abadlali begalofu. Imiqhudelwano ye-twilight ithandwa kakhulu yizivakashi ngesikhathi esishisayo sasehlobo.
Amachibi e-Morere Hot awuhambo lwemizuzu engu-20 nje ukusuka e-Mahia. Lezi yiziphethu zamaminerali ezishisayo zemvelo endaweni yokulondoloza ihlathi. Amachibi omphakathi nangasese, ipikiniki/indawo ye-bbq kanye nezindawo ezibukekayo zehlathi.
IMahia Seaside Market iyinto engcono kakhulu ongayenza ngeSonto. Imikhiqizo emisha kanye nezobuciko nemisebenzi yezandla evela kulo lonke elase-Mahia nesifunda. Yummy etshalwe endaweni futhi eyenziwe iminqumo, amaqanda Quail, ubucwebe, izithelo nemifino, izingubo zokugqoka, ubuciko nokunye okuningi.
Hlola ezinye izinketho ezise- South namaphethelo